သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး GoPro ကင်မရာ – Digital Photography Myanmar
HomeCameras and Equipmentသင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး GoPro ကင်မရာ
July 26, 2016 Jedi Cameras and Equipment 0
အီလက်ထရွန်းနစ် အသုံးဆောင် (Gadget) ဈေးကွက်ထဲကို action ကင်မရာတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် GoPro ကုမ္မဏီက အလုပ်များနေခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော action ကင်မရာ အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ Sony, Panasonic နဲ့ TomTom စတာတွေတင်သာမက EE လိုမျိုး မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာကတောင် GoProလောက်အလုပ်များခဲ့တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ဒီကင်မရာ မော်ဒယ်တွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ အများအပြားဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အတွက် အကယ်လို့များ ခင်ဗျား GoPro ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် သင့်လျော်တဲ့ကင်မရာကို ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကင်မရာမော်ဒယ်အသီးသီးအတွက် တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အထောက်အကူပစ္စည်းတွေကလည်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အသင့်တော်ဆုံးကင်မရာကို ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ GoPro ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူနဲ့ သင့်လျော်မယ့် အမျိုးအစားကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
High-End GoPro ကင်မရာတွေဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့်?
Hero စီးရီးထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်နေတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စတာလင်ပေါင် ၄၀၉.၉၉ သို့မဟုတ် USD ၄၉၉.၉၉ ကျသင့်မှာပါ။
ဒီအမျိုးအစားက 4K(30fps) အရည်အသွေး ဗီဒီယို၊ 12 MP ( တစက္ကန့် ပုံ၃၀) ဓါတ်ပုံနဲ့ 4:3 ပုံထွက်အချိုးအစားကနေ 16:9 ကိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Super View တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide သို့မဟုတ် medium သို့မဟုတ် Narrow ဆိုပြီး မြင်ကွင်းအနေအထား သုံးမျိုးခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Hero4ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
4K (30, 25, 24fps), 4K Superview (24fps), 2.7K (60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 2.7K Superview (30, 25fps), 2.7K 4:3 (30, 25fps), 1440p (80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 1080p (120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 1080p Superview (80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 960P (120, 60, 50fps), 720P (240, 120, 60, 50, 30, 25fps), 720P Superview (120, 60, 50fps), and WVGA (240fps) ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Professional အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ Time lapse၊ ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု၊ GoPro Protune ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ App၊ auto low light mode၊ night mode၊ Time Lapse mode၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေတုံး ဓါတ်ပုံပူးတွဲရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း နှင့် Auto image rotation အလိုအလျောက်ဓါတ်ပုံကိုတည့်ပေးခြင်း၊ video looping၊ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Touch screen display တော့ ပူးတွဲပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ရေလှိုင်းလျှောစီး အတွက် surf ဗားရှင်း နဲ့ ဂီတပွဲတော်တွေအတွက် music ဗားရှင်းဆိုပြီးတောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းတွေမှာဆိုရင် သူတို့နဲ့ သင့်တော်မယ့် mount တွေပါ ထည့်သွင်းရောင်းချပေးထားပါတယ်။
ဒုတိယတန်းစား GoPro Hero အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စတာလင်ပေါင် ၃၂၉.၉၉ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၉.၉၉ ကျသင့်မှာပါ။
ဒီအမျိုးအစားက 4K(10fps) သို့မဟုတ် 1080p (60fps) အရည်အသွေး ဗီဒီယို၊ 12 MP ( တစက္ကန့် ပုံ၃၀) ဓါတ်ပုံနဲ့ 4:3 ပုံထွက်အချိုးအစားကနေ 16:9 ကိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Limited Super View တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide သို့မဟုတ် medium သို့မဟုတ် Narrow ဆိုပြီး မြင်ကွင်းအနေအထား သုံးမျိုးခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ touch display ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Hero4 Silver ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
4K (15, 12.5fps), 2.7K (30, 25, 24fps), 1440p (48, 30, 25, 24fps), 1080p (60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 1080p Superview (60, 50, 48, 30, 25, 24fps), 960P (100, 60, 50fps), 720P (120, 60, 50, 30, 25fps), 720P Superview (100, 60, 50fps), and WVGA (240fps) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Professional အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse၊ ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု၊ GoPro Protune ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ App၊ auto low light mode၊ night mode၊ Time Lapse mode၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေတုံး ဓါတ်ပုံပူးတွဲရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း နှင့် Auto image rotation အလိုအလျောက်ဓါတ်ပုံကိုတည့်ပေးခြင်း၊ video looping၊ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 45 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားမှာတော့ external studio mic တပ်ဆင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ရေလှိုင်းလျှောစီး အတွက် surf ဗားရှင်း နဲ့ ဂီတပွဲတော်တွေအတွက် music ဗားရှင်းဆိုပြီးတောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းတွေမှာဆိုရင် သူတို့နဲ့ သင့်တော်မယ့် mount တွေပါ ထည့်သွင်းရောင်းချပေးထားပါတယ်။
GoPro မိသားစုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားအားဖြင့် အသေးဆုံးပါ။ GoPro Hero4 Session ကို ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဈေးအားဖြင့်လည်းသက်သာပြီး စတာလင်ပေါင် ၁၆၀ သို့မဟုတ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၉၉.၉၉ သာကျသင့်မှာပါ။
Hero4 Session ရဲ့ resolution တွေကတော့ 1440p (30, 25fps), 1080p (60, 50, 30, 25fps), 1080p Superview (48, 30, 25fps), 960P (60, 50, 30, 25fps), 720P (100, 60, 50, 30, 25fps), 720P Superview (60, 50, 30, 25fps), and WVGA (120, 100fps) ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Professional အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse၊ ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု၊ GoPro Protune ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ App၊ auto low light mode၊ night mode၊ Time Lapse mode၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေတုံး ဓါတ်ပုံပူးတွဲရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း နှင့် Auto image rotation အလိုအလျောက်ဓါတ်ပုံကိုတည့်ပေးခြင်း၊ video looping၊ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 45 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ သူ့အတွက် ရေလုံကိုယ်ထည် သပ်သပ်ထပ်မံဝယ်ယူဖို့ မလိုအပ်တာပါပဲ။
ဘထ္တရီကို ဖြုတ်လဲလို့မရတဲ့အပြင် external mic လဲ တပ်ဆင်လို့မရပါဘူး။
Mid-range GoPro ကင်မရာတွေဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့်?
Hero Line up ထဲက ဒီမော်ဒယ်အနေနဲ့ Professional လဲမကျ အပျော်တန်းလဲမဟုတ်တဲ့ သူတွေကို ဦးတည်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ GoPro ကနေ ထပ်မံပြီး ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် ဒီမော်ဒယ်ကို ဈေးကွက်နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဈေးနှုံးကတော့ ၂၉၉.၉၉ အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ် စတာလင်ပေါင် ၂၄၃ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားက 1080p (60fps) အရည်အသွေး ဗီဒီယို၊ 10 MP ( တစက္ကန့် ပုံ၁၀) ဓါတ်ပုံနဲ့ Limited Super View တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide သို့မဟုတ် medium သို့မဟုတ် Narrow ဆိုပြီး မြင်ကွင်းအနေအထား သုံးမျိုးခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Hero3+ Silver ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Professional အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse၊ ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု၊ GoPro Protune ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ App၊ auto low light mode၊ night mode၊ Time Lapse mode၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေတုံး ဓါတ်ပုံပူးတွဲရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း နှင့် Auto image rotation အလိုအလျောက်ဓါတ်ပုံကိုတည့်ပေးခြင်း၊ video looping၊ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 25 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။
Hero3White ကတော့ Hero series ထဲမှာ အလယ်အလတ်တန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ GoPro က ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိပါသေးတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ သို့မဟုတ် စတာလင်ပေါင် ၁၆၉.၉၉ ကျသင့်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားက 1080p (30fps) အရည်အသွေး ဗီဒီယို၊5MP ( တစက္ကန့် ၃ပုံ) ဓါတ်ပုံ တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide သို့မဟုတ် medium သို့မဟုတ် Narrow ဆိုပြီး မြင်ကွင်းအနေအထား သုံးမျိုးခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1050 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Hero3 White ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Consumer အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 15 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။
Touch display နဲ့ external mic ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းတဲ့ အပြင် super view လဲမပါဝင်ပါဘူး။ Bluetooth၊ auto low light mode မပါဝင်ပါဘူး။ ဗီဒီယိုရိုက်နေတုန်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း၊ Burst mode စတာတွေလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
Entry-level GoPro ကင်မရာတွေဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့်?
Hero + LCD ဆိုတာ GoPro ရဲ့ enry-level Hero အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး touch display တပ်ဆင်ထားတာပါ။
စတာလင်ပေါင် ၂၄၉.၉၉ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၉.၉၉ တန် ဒီကင်မရာမှာ 1080p (60fps) video, 8MP (5fps in burst) photos နဲ့ limited Superview ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Ultra wide field of view မြင်ကွင်းပါဝင်ပြီး Wi-Fi+Bluetooth၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။အားသာချက်ကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း touch display ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Hero+LCD ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။1080p (60, 50, 30, 25fps), 720P (60, 50fps), and 720P Superview (60, 50fps)
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Consumer အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ auto low light၊ Time lapse ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 25 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။ GoPro software နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသလို night mode, simultaneous video and photo, continuous photo rates, auto image rotation, Micro HDMI နှင့် external studio mic တို့လဲမပါဝင်ပါဘူး။
GoPro ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် entry level Hero မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး touch display မပါဝင်ပါဘူး။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ သို့မဟုတ် စတာလင်ပေါင် ၁၆၉.၉၉ ကျသင့်မယ့် ဒီမော်ဒယ်မှာ 1080p(60fps) ဗီဒီယို၊ 8MP (5fps burst) ဓါတ်ပုံနဲ့ Limited superview တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide field of view မြင်ကွင်းပါဝင်ပြီး Wi-Fi+Bluetooth၊ အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Hero+ ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ 1080p (60, 50, 30, 25fps), 720P (60, 50 ps), and 720P Superview (60, 50fps) ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားစွမ်းဆောင်ရည်တွေကတော့ အလိုအလျောက် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု နဲ့ Looping video စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ GoPro software နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသလို night mode, simultaneous video and photo, continuous photo rates, auto image rotation, Micro HDMI နှင့် external studio mic တို့လဲမပါဝင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် GoPro ရဲ့ အခြားသော accessories တွေအားလုံးနဲ့ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
GoPro ရဲ့ Basic Hero မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး ဈေးအသက်အသာဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉ သို့မဟုတ် စတာလင်ပေါင် ၁၀၉.၉၉ သာကျသင့်တဲ့ ဒီမော်ဒယ်မှာ 1080p (30 fps) ဗီဒီယို၊ 5MP( 5fps) ဓါတ်ပုံနဲ့ Limited Super view တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Ultra wide field of view မြင်ကွင်းပါဝင်ပြီး အနက်ပေ ၁၃၁ အထိရေစိမ်ခံကိုယ်ထည်၊ ၆၄ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့ microSD စနစ် နဲ့ 1160 mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီစနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Hero ရဲ့ ဗီဒီယိုပိုင်းကတော့ 1080p (30, 25fps), 720P (60, 50fps), and 720P Superview (60, 50fps) ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကတော့ Consumer အဆင့် Low Light မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ burst rates အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ Time lapse ဓါတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ကူးနိုင်မှု စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက bitrate မြင့်မားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 15 Mbps အထိရနိုင်ပါတယ်။ GoPro Protune software နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသလို WiFi+Bluetooth၊ night mode, simultaneous video and photo, continuous photo rates, auto image rotation, Micro HDMI နှင့် external studio mic တို့လဲမပါဝင်ပါဘူး။
ဘယ်အမျိုးအစားကိုဝယ်သင့်လဲ? အရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းပါ။ ဒီမေးခွန်းကို စာဖတ်သူတွေမမေးခင် ကျွန်တော်တို့ကြိုဖြေလိုက်ပါတယ်။
ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် Hero4 Black ကိုသာဝယ်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။ အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားမော်ဒယ်မှာ 4K ဗီဒီယိုနဲ့ fps အများဆုံးရမှာဖြစ်လို့ ပေးရတာနဲ့ တန်တာကို ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ ငွေကြေးကိုကြည့်ရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Hero3 White ကိုဝယ်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။ 1080p ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ ဒီမော်ဒယ်က ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်လောက် ထပ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Hero + LCD ကိုယူပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ Touch display က ဓါတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပြီးချင်း ပြန်ကြည့်ရာမှာ အဆင်ပြေတဲ့အပြင် live view ကလဲ ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ HERO ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝယ်ပါလို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဈေးသက်သာပေမယ့် WiFi မပါလို့ လုံးဝနီးပါး အဆင်မပြေပါဘူး။ HERO ယူမယ့်အစား HERO+ ကိုသာယူပါ။ Full HD ကို 60 fps နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု Hero4session ဖြစ်ပါတယ်။ သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့ မို့လို့ ဦးထုပ် မှာ တပ်ဖို့ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကိုဝယ်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကသာ ဘယ်ကင်မရာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ အသိပေးချင်ပါတယ်။
နောက်လာမယ့် ဆောင်းပါးတွေမှာ GoPro ရဲ့ Protune ဆော့ဖဲဝဲအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး။
ကိုးကား။ ။ Elyse Betters ရဲ့ Best GoPro: Which GoPro should you choose?
မီးမိုးရွာခြင်း – A Steel Wool Experiment